Soomaaliya: Rayidka oo ay dhibaata weyn ka soo gaarayso dagaalka Muqdisho - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Haween iyo carrur looga qaxay magaalda muqdisho © Jehad Nga
Saami aad u sarreeya oo dad rayid ah, oo ay ka mid yihiin tiro aad u badan oo haween iyo carruur dhallinyar ah, ayaa ay dhibaatada ugu weyn ka soo gaareysaa dagaalka ka socda caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, kuwaas oo qaar badan oo ka mid ahi ay la silcayaan dhaawacyo aad u culus.
Xog caafimaad oo lagu ururiyey cusbitaalka Médecins Sans Frontières (MSF) ee degaanka Dayniile, oo ku yaalla bannaanka Muqdisho, ayaa muujinaya in ay socotey dhibaato toddobadii bilood ee ugu horreeyey sanadka.
2,854ta bukaan ee ay kooxaha caafimaadka MSF ay ku daweeyeen Cusbitaalka Dayniile, 48 boqolkiiba waxa ay qabeen dhaawac ka soo gaarey dagaal. Cusbitaalka oo leh 84 sariirood, ayaa 64 boqolkiiba bukaannada ku dhaawacmey dagaalku waxa ay qabeen dhaawacyo culus oo ka soo gaarey qarax, kuwaas oo badanaaba la xiriira duqeynta culus ee joogtada ah ee hoobiyeyaasha ee lagu duqeynayo degaannada ay dadku deggan yihiin ee Muqdisho. Waxaa mudan in la xuso in 38 boqolkiiba dadka qabey dhaawacyada dagaalka la xiriira ay ahaayeen haween iyo carruur ay da’doodu ka yar tahay 14 sano jir.
“Iyada oo uu dagaalku socdo, ayaa rayid tiradoodu ay sii kordheyso la dhigayaa Cusbitaalka Dayniile iyaga oo qaba dhaawacyo aad u culus,” ayaa uu yiri Dr. Naidu Uday Raj, oo ah isuduwaha caafimaadka MSF ee Soomaaliya. “Dadka ayaa cusbitaalka imanaya iyaga oo qaba dhaawacyo culus oo qarax ka soo gaarey iyo dhaawacyo xabado xawaare sarreeya ku socda ka soo gaarey, dhaawacyadaasi oo ay ka mid yihiin jajab. Dad badan ayaa u baahan qalliin. Haweenka iyo carruurta yaryar ayaa weli dhibaato culusi ay ka soo gaareysaa rabshadda.”
Sawirkii ugu dambeeyey ee muujinaya sida ay rabshaddu qayb weyn uga tahay nolosha maalin kasta ee dadka rayidka ah ee ku nool Muqdisho waxaa ay dhacdey 27kii Luulyo markaas oo 45 qof la keeney Cusbitaalka Dayniile ka dib markii ay duqeyn culus ay dhex martey kooxaha mucaaradka hubeysan iyo Dowladda Federalka Ku-meelgaarka ah iyo Ciidamada Nabad-ilaalinta Midowga Afrika (AMISOM). In ka badan kalabar bukaannada ama 26 qof, waxa ay ahaayeen haween iyo carruur ay da’doodu ka yar tahay 14 sano jir.
Xogta caafimaadka ee ugu dambeysa waxa ay waafaqsan tahay tirooyinkii la ururiyey markii ay MSF ay barnaamijkeeda qalliinka ka bilowdey Dayniile bishii Sebtembar 2007dii, taas oo hoosta ka xarriiqeysa dhibaatada weyn ee dadka Soomaaliya ka soo gaareysa iskahorimaadka aan dhammaadka lahayn. Ilaa maanta, 11,888 qof ayaa lagu daweeyey Cusbitaalka Dayniile iyada oo in ka badan 50 boqolkiiba oo bukaannada ka mid ah ay qabeen dhaawacyo ka soo gaarey dagaalka.
MSF waxa ay ugu baaqeysaa dhammaan dhinacyada ku lugta leh iskahorimaadka in ay qaadaan dhammaan tallaabooyinka lagu yareynayo dhaawaca iyo dhimashada soo gaareysa dadka rayidka ah iyo in ay ixtiraamaan ilaalinta/dhowrista ay mudan yihiin tas-hiilaadka caafimaadka.
MSF waxa ay ka shaqeysaa mashaariic ay ka waddo siddeed gobol oo Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya ka socda. In ka badan 1,300 shaqaale Soomaali ah, oo ay taageerayaan in ka badan 100 shaqaale oo Nayroobi, Kenya jooga, ayaa daryeelka caafimaadka aasaasiga ah, daaweynta qaaxada iyo nafaqo-xumada, qalliin, iyo biyo iyo sahayda gargaarka siiya dadka barokacay. MSF kama qaadaneyso dowlad wax maaliyad ah oo ay ku maalgeliso maashriicdeeda ay ka waddo Soomaaliya, iyada oo ku tiirsan keliya deeqaha ay bixiyaan shakhsiyaad ku nool dunida oo dhan.
Tags: barokac, dayniile, Muqdisho, rabshad